အေးမြသော လေပြည်လေညှင်းလေးတွေက ကျီစားသည့်နှယ် တစ်ချက်တစ်ချက် နွေဦးရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို တိုးဝှေ့ကာ လာရောက် လှုပ်နိုးနေသောကြောင့် မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ မနက်နေရောင်ခြည်က အခန်းတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လျှက်ရှိသည်။ တိုင်ကပ်နာရီက ကိုးနာရီခွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြကာ အသံတိတ်ဖြင့်
Read more: အမှုတော်ဆောင်လူငယ်များ
သခင်ယေရှု အစစ်အမှန်ဖြစ်သည် - Jesus is Real
ဆရာမခင်ဆွေသန်း (နီဗရားစကား၊ USA)
သက်သေခံစာအုပ် - " စစ်မှန်သောဘုရားသခင် ယေရှုခရစ်တော် " မုရန်မဂ္ဂဇင်း အဖွဲ့မှတဆင့် ဆရာဆိုး မြန်မာဘာသာပြန်သည်။ ၂၀၁၀ ဇူလိုင်လတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ထုတ်ဝေပြီး ခရစ်ယာန်စာပေနှင့်အသင်းတော်များတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီစာအုပ်ပြီးစီးရေးအမှုတော်အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်မှတဆင့် ကျွန်မကို ခွန်အားနဲ့ ဥာဏ်ပညာကို ပေးသနားတော်မူတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ တန်ခိုးတော်မပါရင် ကျွန်မကိုယ်တိုင် ဒီစာအုပ်ကို ပြီးစီးမှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မဟာ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိခဲ့ပြီး၊ ဒီစာအုပ်အားဖြင့် ကျွန်မက ဘုရားတပည့်တော်များ၊ သားသမီးများကို သခင်ယေရှုဆီကို သယ်ဆောင်လာနိုင်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Read more: သခင်ယေရှု အစစ်အမှန်ဖြစ်သည် - Jesus is Real
ပြည်ပရောက်သင်းအုပ်ဆရာ (၁၀) - ဘုရားသခင်၏ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း
ယုဒဿန်အသင်းတော် 12-Sep-2010 HCF အဖွဲ့ဦးဆောင်ကျင်းပသော တနင်္ဂနွေဝတ်ပြုခြင်းမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ သံစုံချီးမွမ်းစဉ်
သော့ချက်ကျမ်းပုဒ် ။ ။ အလွဲမယူကြနှင့်။ ဘုရားသခင်သည် မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံတော်မမူ။ လူသည် မျိုးစေ့ကြဲသည်အတိုင်း အသီးအနှံကို ရိတ်ရ လိမ့်မည်။ ဂလာ ၆း၇ ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နာခံခြင်းရှိရမည်ဟူသော မူဝါဒအားဖြင့် အသက်ရှင်ကြရ မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဘယ်သောအခါမှ မိမိ၏သားသမီးများကို အပြစ်၌ မကျင်လည်စေလိုပေ။ ကျမ်းစာက““ချစ်သားတို့၊ သင်တို့သည် ဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းငှာ၊ ဤအရာတို့ကို သင်တို့အားငါရေး၍ ပေးလိုက်၏။””ဟု ဆိုသည်။ ၁ယော ၂း၁
ယုံကြည်သူတဦးဦး ဆန္ဒရှိရှိ(စိတ်ပါလျက်) အပြစ်ကို ကျူးလွန်ပါက ဘာဖြစ်မည်နည်း? ဆိုသောမေးခွန်းအကြောင်း ပြောလိုပါသည်။ ကျမ်းစာက ““အလွဲမယူကြနှင့်။ ဘုရားသခင်သည် မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံတော်မမူ။ လူသည် မျိုးစေ့ကြဲသည်အတိုင်း အသီးအနှံကို ရိတ်ရ လိမ့်မည်။””ဟု ဆိုသည်။ ဂလာ ၆း၇ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့သောအပြစ်ကိုမဆို ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်ထံသို့သွား၍ ထိုအပြစ်ကို ၀န်ချတောင်းပန်ပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။
Read more: ပြည်ပရောက်သင်းအုပ်ဆရာ (၁၀) -...
ကျွန်တော်ဟာ တက္ကစီမောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူတစ်ယောက်ပါ။ နေ့လည်ပိုင်းတော့ ကျွန်တော် လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်လေးတွေ၊ ၀ါသနာပါတာလေးတွေ လုပ်နိုင်အောင်လို့ ညဆိုင်းကိုသာ မောင်းပါတယ်.. ကျွန်တော့် တက္ကစီဟာ ခရီးသည်တွေရဲ့ ရင်ဖွင့်ရာ ဌာနလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကားငှားတဲ့ ခရီးသည်ဟာ
Read more: ဘ၀ရဲ့ နိဂုံးချုပ် တံခါးပိတ်သံ
သင့်မျက်လုံးကို ငှားပါ................ Borrow Your Eyes
Ma Than Thar
ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများဟာ အလှူအတန်း ရက်ရောတယ်လို့ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု ထူးခြားတဲ့ အလှူဒါနလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေး ပါရစေ။ အဲဒီအလှူက ငွေကြေး အကုန်အကျလည်း မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ အားလပ်ချိန်လေးမှာ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်သွားလို့ ရပါတယ်။ အချိန်လေး နည်းနည်းလောက် ပေးနိုင်ရင် ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့
Read more: သင့်မျက်လုံးကို ငှားပါ................ Borrow...
ပြည်ပရောက်သင်းအုပ်ဆရာ (၉) - မြင်းလေးစီးနဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ
Rev. Dr Latt Yishey
မြင်းလေးစီး နဲ့ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ
ဆရာလတ်ယေရှဲ (01 Aug 2010)
မြို့ငယ်လေးတစ်ခုက သားလေးယောက်ရှိတဲ့ ခရစ်ယာန်မိသားစု၊ ဘုရားကျောင်းလဲမလာ၊ ဆုတောင်း၊ ၀တ်ပြုစည်းဝေးတွေလည်း မတတ်ကြဘူး။ သူတို့ဖာသာပဲ နေထိုင်ကြတာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်လဲ မရဖြစ်နေပါတယ်။ တနေ့တော့ သားအကြီးဆုံးကို မြွေပွေးပေါက်လို့ ဆေးရုံသွားကုရတယ်။ မသက်သာဘူး။ အသည်းအသန်ဖြစ်နေချိန်မှာ သင်းအုပ်ဆရာကို ခေါ်ပြီးဆုတောင်းခိုင်းတယ်။ အဲဒီအခါ သင်းအုပ်ဆရာဆုတောင်းချက်ကတော့ "အခုလိုပဲ ဘုရားသခင်ကိုသိလာအောင် စေလွှတ်လိုက်တဲ့ မြွေပွေးအတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွှမ်းပါတယ်။ နောက်ထပ်မြွေပွေး ၄ကောင်ကို ထပ်မံစေလွှတ်ပေးဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်" ... သူတို့ဖခင် နဲ့ ကျန်တဲ့ သား၃ယောက်အတွက် ဆိုလိုတာပေါ့။
Read more: ပြည်ပရောက်သင်းအုပ်ဆရာ (၉) -...
အသင်းတော်မွေးနေ့ - ဆိုပြီး နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွေလုပ်ကြတယ်။ အဖွဲ့အစည်း၊ အဆောက်အဦးတွေမှာလည် ထို့အတူ .. ဘယ်ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်တယ် .. ဆိုတာကို နှစ်ပေါင်းကြာလာတာနဲ့အမျှ ဂုဏ်ယူပြောဆိုကြတယ်။ ၀ိုင်အရက်လိုပေါ့ ... နှစ်ပေါင်း၃၀၀၀လောက်က ၀ိုင်အရက်တွေ ဒေါ်လာသန်းချီပေးပီး သူဌေးကြီးတွေ
Read more: သြဂုတ်လ မွေးနေ့လက်ဆောင်
စနေနေ့ အသင်းတော်ဆုတောင်းဝတ်ပြုခြင်း ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇
အိမ်ရှင် ဦးမခါးဒိုသည် ကျောက်ကြီးဇာတိဖြစ်ပြီး၊ ငယ်စဉ်က မစ်ရှင်ကျောင်းတွင် ဂီတကို တစ်ဘာသာအဖြစ် သင်ယူခဲ့ရပါသည်။ ယခု စင်ကာပူ ယုဒဿန်အသင်းတော် ဂီတ၊ကွိုင်ရာ Choir သီချင်းအဖွဲ့ ဦးဆောင်သူအဖြစ် အမှုတော်ထမ်းရွက်နေပါသည်။ ဘားအံမြို့တွင် ဆရာစောမင်းလွင်နှင့်ရင်းနှီးခဲ့ရသည်။ ဦးမခါးဒို 2010 တွင်ဆေးစစ်ရာ ကျောက်ကပ်၅ရာနှုံးသာ အလုပ်လုပ်သည်ဟု လောကဆေးပညာရှင်များမှ သတိပေးခဲ့စဉ် ရက်အနည်းငယ် ၀မ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းနိုင်ပြီး ကျန်းမာစွာဖြင့် မိမိအလုပ်၊ ဘုရားကျောင်းအလုပ်များကို ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ သူ၏ နေအိမ်တွင်ပြုလုပ်သော စနေနေ့ အသင်းတော် ဆုတောင်းဝတ်ပြုစည်းဝေးတစ်ခုတွင် ပြည်ပရောက်သင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦး ဟောကြားချက်ဖြစ်ပါသည်။
Read more: ရွှေရတနာနယ်မြေ - ပြည်ပရောက်သင်းအုပ်ဆရာ(၇)
ပြည်ပရောက် သင်းအုပ်ဆရာ (၈) - ဘုရားဂတိတော်
So Sarah laughed to herself as she thought, "After i am worn out and my master is old, will I now have this pleasure?" NIV Genesis 18:12
လောကတွင် ပိုက်ဆံရှိလျှင် ဘော်လုံးအသင်းများ ထောင်၍ရပါသည်။ အသင်းတော်ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်အားဖြင့်သာ တည်ထောင်နိုင်ပါသည်။ ယနေ့ အသင်းတော် ၁၂နှစ်မြောက် ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရသောကြောင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွှမ်းပါသည်။
ဓမ္မရာဇ၀င် ပထမစာစောင် ၁၆း ၁
တဖန်ထာဝရဘုရားက၊ ရှောလုကို ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာမှ ငါပယ်သောကြောင့်၊ သင်သည် အဘယ်မျှ ကာလတ်လုံး စိတ်မသာ ညည်းတွားလျက်နေလိမ့်မည်နည်း။ သင်၏ဘူးကို ဆီနှင့်ပြည့်စေလော့။ ဗက်လင်မြို့ သား ယေရှဲရှိရာသို့ငါစေလွှတ်မည်။ သူ၏သားတို့ တွင် ငါ့အဘို့ ရှင်ဘုရင်တပါးကိုငါပြင်ဆင်ပြီဟု ရှမွေလအား မိန့် တော်မူ၏။ ရှမွေလက၊ အကျန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ သွားနိုင်ပါမည်နည်း။ ရှောလုကြားလျှင်သတ်ပါလိမ့်မည် ဟုလျှောက်သော်၊
Read more: ပြည်ပရောက် သင်းအုပ်ဆရာ (၈) - ဘုရားဂတိတော်
စွန့်ကြဲသော်လည်းဥစ္စာတိုးပွားတတ်သောသူရှိ၏ (သုတ္တံ ၁၁း၂၄က)
အမှတ်စဉ် (၄၉) သြဂုတ်လ ၂၀၁၀ခုနှစ်
Read more: မုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင် စာစောင်